ukwazi Archives - Mytika Speak
Ikhaya / ukuqonda
Umaki - ukwazi
Kwangathi 31, 2021
Kunokuzivocavoca okuningi okwenziwa amalangabi amawele komunye nomunye ukulinganisela nokukhula ndawonye. Imininingwane yalokhu kuvivinya umzimba inganikezwa kubo ngemuva ...
Yebo, amalangabi amawele angaba ubulili obufanayo. Ngenkathi amanye amawele ephikisana, lokhu akuhlali kunjalo kwabanye. Kusengumphefumulo owodwa ohlukanisayo kepha ukwahlukana ...
Amalangabi amabili angafeza noma yikuphi ukuthunywa kwawo okuqondile. Lokhu kuzokwembulwa kubo ngesikhathi esifanele. Kuhlukile kuwo wonke umuntu. Abanye abantu...
Kwangathi 24, 2021
Iningi labantu lizizwa lingenalutho ngaphakathi kubo, okuwukulangazelela uthando oluphelele oluhlangene. Lokhu kulangazelela kungabonakala njengobufakazi bokuthi kungenzeka uthando lukaNkulunkulu Uma othile ...
Kwangathi 17, 2021
Izigidi zobuso engizibonayo, abangane bami abayisikhombisa bangigqolozele. Ukuzifihla okuningi abakuthathayo, ngubani olandelayo ozenza ongeyena? Shintsha ukubukeka komzimba, noma ukukhetha okuyisikhombisa kuphela ...
Kwangathi 1, 2021
Kuyenzeka. Noma yini eyenzekayo empilweni, ngaphakathi ubazi ukuthi kuzokwenzeka.Uwazi kanjani ukuthi 2 + 2 = 4? Kuzwakala kanjani ukwazi lokho? Kuzwakala sengathi ...
Kungaba nzima kakhulu kothile ukuthola i-core ray yabo. Kunezizathu ezimbalwa zalokhu. Okokuqala, abantu abaningi bane-jumble yemisebe ehlukile ...
Ungafunda ukuba yi-empath ngokubheka izimo zabanye abantu bese ucabanga ukuthi kuzozwakala kanjani ukube ubunguye. Ekuqaleni, lo mcabango ...
Ukukhanyiselwa ukuvuma ngokugcwele komphefumulo womuntu. Kufana nokukhanyisa isibani umuntu anakho kakade ngaphakathi kuye. Indlela eya ekukhanyeni ...
1 2 3 ... 22 Olandelayo